Chelsea oo guul dirqi ah ka soo heshay kooxda Fulham oo ay booqatay… +SAWIRRO – Gool FM
(London) 16 Jan 2021. Chelsea ayaa guul dirqi ah ka soo heshay kooxda Fulham oo ay ku booqatay garoonkeeda Craven Cottage, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-1, xilli ciyaartan ay qeyb ka aheyd kulamada isbuuca 19-aad ee horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee ciyaarta ayeey ku kala nasteen labada kooxood Fulham iyo Chelsea barbardhac 0-0 ah.
Daqiiqadii 78-aad kooxda Chelsea ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 0-1 ka dhigay xiddigooda qadka dhexe ee Mason Mount.
Ugu dambeyntii ciyaarata ayaa waxay ku soo idlaatay 0-1 oo ay Chelsea kaga soo adkaatay kooxda Fulham oo ay ku booqatay garoonkeeda Craven Cottage. Blues ayaa booska 7-aad kaga jirta miiska kala sareynta ee horyaalka Premier League iyaga oo leh 29 dhibcood.